सरकारी कर्मचारीको एक दिनमै ८ छाक खाना - Dainik Nepal
दैनिक नेपाल २०७७ माघ ७ गते ७:५१
दोलखा, ७ माघ । सामान्यतया मान्छेले दिनमा कति पटक खान सक्ला ! बढीमा ३ पटक। दोलखाको एक सरकारी कार्यालयका कर्मचारी भने दिनमा ८ छाक खाँदा रहेछन् !
आलेप प्रतिवेदनले त्यसलाई अनियमित भनेको छ। रविन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख डबल पाण्डेका छोरा हुन्। उनी सांसद पशुपति चौलागाईंको क्षेत्रका पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका प्रतिनिधि हुन्। उनैले २०७७ असार ४ र ५ गते बिगु गाउँपालिकाअन्तर्गतका योजना अनुगमन गरेका थिए।
त्यसमा पनि उही घटना भयो। दुई दिनमा चार कोठा र १० छाक खाना। त्यसको ७ हजार ३ सय भुक्तानी। प्रतिवेदनले यसलाई पनि अनियमित भनेको छ। रविन्द्र गाैतमले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।